Xian, na-elegharị anya na obodo ndị China nke terracotta ndị dike | Akụkọ Njem
Xian, na-agagharị obodo ndị China nke terracotta ndị agha
Ndị dike nke Xian bụ isi ihe na-adọrọ mmasị ndị njem nleta nke obodo China a nke nwere ihe karịrị nde mmadụ isii bi na mgbago ugwu nke mba ahụ, na nso nso Mongolia. Agbanyeghị, obodo a nwere ọtụtụ ebe ịmara n'etiti ụlọ, ihe ncheta, mgbidi ma ọ bụ ebe obibi ndị Alakụba mara mma.
Na-esote, anyị na-aga n'okporo ámá nke Xian iji mụta ntakịrị ihe banyere ala nke ndị agha terracotta ndị a ma ama si na East East. Nwere ike soro anyị?
1 Ebee ka Xian dị?
2 Ebe nkiri ndị njem nlegharị anya nke Xian
2.1 Ndị dike nke Xian
2.1.1 Ọnye na-bụ Qin Shi Huang?
2.1.2 Kedu ka saịtị ihe ochie dị?
3 Nkeji iri na ise nke ndị Muslim nke Xian
4 Ihe nlele ndi ozo nke Xian
Ebee ka Xian dị?
Xian bụ isi obodo nke Shaanxi. Ọ dị n'ebe ugwu China, na nso ókè ya na Mongolia, ọ bụkwa otu n'ime obodo ndị kacha ochie na akụkọ ihe mere eme na mba ahụ. Na mgbakwunye, a na-ahụta ya na nsọtụ ebe ọwụwa anyanwụ nke okporo ụzọ Silk a ma ama, otu n'ime ụzọ azụmaahịa na-ekwo ekwo na mbara ala.
Ebe nkiri ndị njem nlegharị anya nke Xian
Ndị dike nke Xian
Nke a bụ isi ihe ndị njem nlegharị anya na ọ bụ bọs na-agba elekere site na Xian. Mausoleum nke Emperor Qin Shi Huang bụ nchọpụta kachasị ukwuu nke oge a. Dị ka ọ na-adịkarị, nchọpụta ahụ mere nke ọma na 1974 mgbe ụfọdụ ndị ọrụ ugbo sụrụ ngọngọ n'elu ngwongwo ala nke nwere ndị dike mgbe ha na-anwa ịwu olulu mmiri.
Kemgbe ahụ ndị ọkà mmụta ihe ochie enwetaghachila ihe karịrị ọnụ ọgụgụ 6.000, ha niile dị iche na ibe ha, n’ime atụmatụ nke 8.000. Ma ndị agha Terracotta bụ naanị ọnụ mmiri iceberg nke ihe zoro ezo n'okpuru ala.
Na Mausoleum nke Emperor Qin Shi Huang, a ka nwere ọtụtụ akụ ndị a ga-achọpụta, nke ka dị kemgbe ihe karịrị afọ 2.200 n'ime pyramid atọ dị elu, nke dị mita 76, kpuchie ya na ụwa ma chekwaa ya site na usoro mgbagwoju anya. na ọnyà ga - egbochi ya ịnweta ụdị Indiana Jones dị ọcha.
Ka o sina dị, gọọmentị achọghị iji ohere ọ bụla wee chọọ ichere maka oge kwesịrị ekwesị iji nyochaa pyramid na ụlọ eze Qin mgbe teknụzụ dị elu.
Ọnye na-bụ Qin Shi Huang?
Emperor Qin Shi Huang bụ onye ọchịchị mbụ na-eme ka China dị n'otu na onye mbido na-ewu mgbidi mbụ. N'ihi atụmatụ aghụghọ ya nke agha, ọ gbakwụnyere alaeze ndị gbara gburugburu ruo mgbe ha jikọrọ obodo ahụ n'ihe dị ka 221 BC.
Eze ukwu ahụ nwụrụ ka ọtụtụ afọ gachara, na 210 BC, mgbe ọ na-eme njem na ndịda obodo ahụ, ha na-ekwu na ha na-achọ ndụ ebighi ebi n'agwaetiti ndị a na-ahụkarị.
Ma ọ bụ ụjọ na ndị iro ya ga-achọ imegwara ya mgbe ọ nwụsịrị ma ọ bụ naanị n'ihi megalomania ya, nke bụ eziokwu bụ na o nyere iwu ka e wuo nnukwu mausoleum nke ga-edekọ ike ya n'ụwa.
Kedu ka saịtị ihe ochie dị?
Ejiri ugwu gbaa gburugburu ebe a na-egwupụta ihe ochie ma kee ya ụzọ atọ. N'oge ịmalitere nleta ahụ, ọ bara uru ịmalite ịhụ ha na njedebe ikpeazụ (nke kachasị njọ) wee gbagoo ruo mgbe ị mechara na nke mbụ ebe achọtara ndị dike, ụfọdụ wughachiri na ndị ọzọ adọrisịrị n'ala. .
Ndị agha a na-enye echiche banyere oke ala na akụkụ mmadụ nke kọwaala China kemgbe oge ochie. Ihe ọzọ kwesịrị ịrịba ama bụ na onye agha Xian ọ bụla nwere physiognomy nke ya na nkọwa onwe onye na uwe ya na poses.
Gburugburu ebe a na-egwupụta ihe enwere netwọ ndị njem nke ụlọ ahịa na ụlọ nri iji nọrọ ụbọchị ebe ị nwere ike ịzụta ụdị nri ngwa ngwa na ncheta dị iche iche. Mana ọ bụrụ na ị nwere naanị otu ụbọchị iji leta ya, ọ ka mma ịlaghachi were oge ahụ na ụzọ ndị ọzọ.
Nkeji iri na ise nke ndị Muslim nke Xian
Nnukwu ụlọ alakụba nke Xian
Jupụta n'ụlọ ntu na ụlọ ahịa, iji rie ya kwesịrị ileta ọmarịcha Muslim nke Xian. N’ebe ahụ ị nwere ike ịnụ ụtọ nri ụtọ dịka bọọlụ ejiri anụ ma ọ bụ akwụkwọ nri sie, Yang Rou Pao Mo (ofe atụrụ na ofe achịcha), Liangpi (noodles oyi) ma ọ bụ kabobs (skewers anụ). Otu ihe na-adọta uche kachasị banyere gastronomy nke Xian na mpaghara a bụ na ịnwere ike ịnwale ụdị nri ndị Alakụba na ụdị nke ndị China.
Etinyere Islam na mpaghara ihe karịrị otu puku afọ gara aga mana e kwere ka omume ya malite na 651 AD ma taa, ihe karịrị mmadụ 50.000 nke agbụrụ Hui bi ebe a. Nnukwu ụlọ alakụba nke Xian bụ nke kachasị ukwuu na mba ahụ ma na-enyekwa ọmarịcha ihe owuwu, ịbụ ngwakọta nke ụlọ ndị China na nke Alakụba. N'ime nnukwu ụlọ alakụba anyị na-ahụ ogige anọ nwere ngwakọta nke ụlọ na ogige. N’ogige nke atọ, ụlọ elu ahụ a na-ahụ maka ikpe ekpere dị ma nke anọ, nnukwu ọnụ ụlọ nwere ikike ịnabata puku mmadụ.
Ihe nlele ndi ozo nke Xian
Towerlọ elu mgbịrịgba
Otu n'ime ihe ncheta kachasị ama na Xian bụ Bell Tower, ụlọ nwere ụdị akụkụ anọ nke kpuchiri elu ụlọ nke China. Dabere na akụkọ mgbe ochie, mgbịrịgba dị n'ime ụlọ elu a ka emechara ka dragọn ahụ pụọ.
Ihe ncheta ndị ọzọ na-adọrọ mmasị bụ Drum Tower (nke malitere na narị afọ nke XNUMX na nke nwere ihe dị n'ime) na Nnukwu Ọhịa Goose Pagoda nke na-esote Templelọ Nsọ nke Nne Nne.
Anyị enweghị ike ichefu nnukwu mgbidi gbara Xian gburugburu, nke kachasị mma na China niile nke wuru na narị afọ nke XNUMX n'elu nke gara aga. Ejiri mope gbara ya gburugburu ma jiri peepe na ụlọ elu tụọ ya gburugburu. Ọ dị elu ruo mita 12 n'ihi ya, ọ nwere echiche pụrụ iche ma ọ bụ nke kachasị na China.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Asia njem » China » Xian, na-agagharị obodo ndị China nke terracotta ndị agha
Sancerre, a ihunanya getaway si Paris
Site na Seville gaa Rome, njem njem, maka naanị euro 169. Nso ahịa!